Waa Maxay The Meals Best Si Cun On Tareenadu | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Waa Maxay The Meals Best Si Cun On Tareenadu
cuntada ugu fiican in la cuno tareenada maalmahan waa run ahaantii aad u delicious. Maxaa yeelay, tareenada badan bixiyaan guri 5-star iyo cuntada heerka koowaad. Tan waxaa ku jira cuntada by dabaakhyo caanka ah ee dunida lagu sameeyo. Waxaad laga yaabaa in loo isticmaalo in lagu reading ku saabsan la yaab leh cuntada ee tareenada ama muuqaal qurux badan waxaad ka arki kartaa on a safarka tareenka. Sidaa darteed waxaa kugu layaabi kara in cuntada aad tareenka ku cuni karto ay si siman u fiican tahay.
Halkan waxaa ku qoran sare ee 7 cuntada ugu fiican in la cuno tareenada aad cuni kartaa
Fogaadaan in ay dalal badan oo ku yaal Britain ka London, tareen this bixiyaa khibrad cuntada wanaagsan. Cunitaanka waxaa ka mid ah cuntooyinka ay abuureen kuugga caanka ah Tom Kerridge iyo Anton Mosimann kuwaas oo caan ku tahay kooxaha cuntada ay aqoonyahanada dalka UK.
Waxaa laga yaabaa safarka ugu quruxda badan uguna quruxda badan meeraha. raaxo Tani 1920 ee tareenka style in u safri marayo baadiyaha Peruvian bixiyaan cunto fiican,. Liiska afarta koorso ee loo yaqaan 'Andean' ee loo waxyooday waxaa ku jira waxyaabo lagu farxo sida ham iyo eucalyptus iyo hilib lo'da oo leh cinab iyo tartar.
3: Blue tareenka (Koonfur Afrika) – cuntada ugu fiican Africa ee in la cuno tareenada
tareen Tani dalabyo 5 Xiddiga Cuntada loo yaqaan “Säpo ayaa Blue,” taas oo ka mid ah suxuunta kala duwan la dhigtay maaddooyinka degaanka. Qaar ka mid ah macaan dhadhan tusaale ahaan gorayada, South Africa lohod, iyo ugaadhsiga.
4: Tareenka Weyn ee Koonfurta (Australia)
Sidoo kale in Tareenku Blue, aad ku raaxaysan karaan cunto cusub degaanka illaha on this Australian Southern Rail. maqaayad The, qeybiyeyaasha degaanka, iyo beeralayda ayaa isu yimid si ay u abuuraan cunnada Australia Yimid ugu fiican oo cunto iyo khamri labada. Tareenka ayaa sidoo kale kasoo muuqday dhowr maqaayadaha in ay bixiyaan suxuunta wayn. Tusaale ahaan kangaroo, saltbush iyo ubax Rosella duurjoogta ah, barramundi iyo Margaret River jiiska.
5: Tareenka Khamriga ee Napa Valley (California) – America cuntada ugu fiican in la cuno tareenada
Dabcan, tareen leh noocan ah magaca u adeegi doonaa khamri aad u fiican ee u tiro badan iyo sidoo kale waxay u adeegtaa cunto weyn. The 3 jikooyinka on board bixiyaan rakaab cuntada Gormeega Dabcan badan ee tareenka in loo qorsheeyay oo la dhisay 1917.
In meesha ugu horeysa, erayada Orient Express tagaan gacanta-in-gacanta la cuntada wanaagsan. caansan dunida ee Tani tareen safaradiisa iyada oo loo marayo Yurub waxayna bixisaa cunnooyin lagu sameeyo maaddooyin cusub oo laga soo ururiyay tareennada. Kuugga diyaaradda saaran Yannick Alleno ayaa leydin fasalka ah marxalad hore la suxuunta sida digir Royal, Bresse fricassee digaag leh boqoshaada iyo bariis duban.
7: Royal Scotland (Scotland) – cuntada ugu fiican Yurub inay cunaan tareenada
Last on liiska tareenka ganaax cuntada our, tareen this qoreysa laba baabuurta cuntada taariikhi ah. Waxaad ku raaxaysan karaan cuntada dhaqanka sida mackerel- ama quraacda Scottish. Fadlan la soco in casho on tareenka waa mid aad rasmi ah, si loo hubiyo in marwooyin xiran jaakadaha iyo naag dharka ku haboon cunnada.
tigidhada Book tareenada cuntada delicious
On hadda in aad samaysay la akhriyey, sidaas darteed maxaad u malayn of cuntada ugu fiican in la cuno tareenada. At Save A Tareen aan dabooli tareenada badan oo Yurub ah in ay bixiyaan cunto wanaagsan oo rakaab ah. Tayaasha tigidh tareen weligii fudud. ballansan safarka tareenka aad on our site hadda iyo in ka yar 3 daqiiqo oo aad ka heli kartaa tigidhka tareenka fiican ee safarka. Buy tababartay Tigidhada siyaabo kala duwan marka lagu daro Card Credit waaweyn.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-meals-trains/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#cuntada talooyin tareenka tareen safarka